❤️ NgaseLwandle ❤️ IApartment ephambi kolwandle + iWiFi - I-Airbnb
❤️ NgaseLwandle ❤️ IApartment ephambi kolwandle + iWiFi
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguUnwind Holidays
Unwind Holidays iyakuvuyela ukukwamkela ku:
// Franklin Beachfront Apt no 3 - Ngaselwandle //
Ngoku ngeWiFi yasimahla!
UKUJONGA PHEZULU ISIQITHI SEGRANITE
Ukuqhayisa ngeembono ezigqwesileyo zolwandle kwenye yezona ndawo zifunwa kakhulu kwi-Encounter Bay. Kufuphi neBluff, iSiqithi saseGranite kunye nentliziyo ekufutshane yeVictor Harbour.
I-APARTMENT ESEBHATSHINI IDIBANA NEBAY
Unwind Holidays inikeza: 'NgaseLwandle' eFranklin Parade, Encounter Bay.
IMIBONO EPHAMBILI YOKUSUKA KWIGRANITE ISLAND UKUYA EBLUFF
Ukuqhayisa iimbono ezigqwesileyo zolwandle kwenye yezona ndawo zifunwa kakhulu kwi-Encounter Bay. Kufuphi neBluff, iSiqithi saseGranite kunye nentliziyo ekufutshane yeVictor Harbour. Le ndlu ikumgangatho ophantsi ikumgama omfutshane wokuhamba ukuya eYilki Deli naseBeach Hut Cafe.
Le propathi ifanelekile kwindawo yokubaleka yothando kwizibini kunye neentsapho ngokufanayo.
Yonwabela indawo engqonge i-surreal ye-Encounter Bay unyaka wonke. Thenga intliziyo yakho kwiiboutique ezininzi eVictor Harbour nasePort Elliot. Tyelela i-Fleurieu Peninsula okanye utye indlela yakho ngemveliso yasekhaya emnandi kunye neeresityu kunye neekhefi.
Ibekwe elunxwemeni ngombono obalaseleyo wolwandle lwebhayi kunye neSiqithi saseGranite, uyakonwabela ukuhambahamba ecaleni kolwandle, ukuya encotsheni ye-Bluff okanye ujikeleze ibheyi ukuya eVictor Harbour kunye neCauseway eya kwiSiqithi saseGranite.
Le ndlu enamagumbi okulala amathathu inegumbi lokuhlambela lesibini inyathelo ukusuka kumnyango ongasemva. Ilungele ukuxubha isanti ngaphambi kokungena kwigumbi. Igumbi lokulala lesibini linebhedi enkulukazi kwaye igumbi lesithathu linebhedi enye.
Yiza uphumle kwaye wonwabele yonke into enokubonelela nge-Encounter Bay
Ngaphantsi kweeyure zokuqhuba usuka e-Adelaide, lo mmandla ngumxube we-eclectic yeelwandle ezinesanti, imbali, ilifa, ubugcisa kunye nezilwanyana zasendle.
- Ngena kwiibhedi esele zenziwe kwaye kubonelelwe ngezinto ezibalulekileyo zasekhitshini. Akukho mfuneko yoxinzelelo ngeeHolide zokukhulula.
-Kufunwa indawo e-Encounter Bay.
-Ukuhamba umgama ukuya kwiivenkile zokutyela kunye neendawo zokutyela, kubandakanya neBeach House Restaurant & Yilki Cafe.
-Kufikeleleka ngokulula kwiflethi ekumgangatho ophantsi.
-Kufuphi neBluff, kwiSiqithi saseGranite kunye nentliziyo ekufutshane yeVictor Harbour.
-Le propati ilungele ukubaleka kwezothando kwizibini kunye neeholide zeentsapho ngokufanayo.
-Uyokonwabela ukuhambahamba ecaleni kolwandle, ukuya phezulu eBluff.
-Amagumbi okulala ama-3 abanzi.
- Gcoba isanti kunye negumbi lokuhlambela lesibini kumgama osuka emnyango
- Ilinen esemgangathweni kunye neethawula zifakwe kwixabiso elipheleleyo.
- Ixesha lokungena yi-2pm kwaye ixesha lokuphuma li-10 am. Ngaphandle kokuba kwenziwe amalungiselelo angaphambili, *kuxhomekeke ekufumanekeni
- Nceda uqaphele ukuba le ndawo ayitshaywa ngokungqongqo ngaphakathi nangaphandle.
- Uxolo akukho izilwanyana zasekhaya okanye amaqela.
"Ndifuna nje ukubulela ngokuhlala okuhle kwiyunithi emnandi! Ngokuqinisekileyo iya kuba apho usapho lwethu luhlala khona ngoku nanini na sindwendwela uVictor. Ndikwacebisa ngasekhohlo ngasekunene kunye neziko kubahlobo bethu kunye nosapho - bebepha Enkosi kakhulu ngako konke okongeziweyo okuncinci ukuba nawo enze ubomi balula kakhulu endaweni yokubaleka ukuya ezivenkileni ngoSuku 1. Iwayini kunye neechoki zixatyiswe kakhulu :-) Ibilixesha elimnandi kude, ligqibelele ukuba umama wam abe nalo. ikhefu kwikhaya labalupheleyo ukuze atye kwaye ahlale kwaye onwabele ukujonga ulwandle."
Pam, ngoJuni, ngo-2016
Iimbono kunye ne-ambience yale ndawo yayibalasele. Indawo entle yokuphumla. Ikofu emnandi kumganyana nje omfutshane. Ukuhambahamba ecaleni kweFranklin Esplanade kwakusomeleza.
-Rob, ngo-Agasti, ngo-2016
Unwind Holidays ikhethekileyo kwixesha elifutshane / iiholide zokurenta. Yeyona nto iphambili kuthi ukwenza ukuhlala kwakho kube kukonwabela kwaye kukhumbuleke. Qhagamshelana nelinye leqela lethu lokubhukisha ngobuhlobo ngefowuni, i-imeyile okanye iSMS kwaye siya kuphendula yonke imibuzo yakho.
UDINWE KWAYE UXINEZELEkile?
Yiya ngqo kwi-Encounter Bay kwaye uhlale ngaseLwandle kwiFranklin Parade!
Ngamanye amaxesha ekuphela kwento eya kunyanga iblues yesixeko sakho kukubethwa ngumoya omtsha, welizwe! Shiya loo ntaba yamaxwebhu kwidesika yakho kunye nefowuni engayeki ukukhala nje ngeentsuku ezimbini. Uza kuhamba kwiinduli kwaye ubone ukuba lunjani utshintsho olunokwenziwa luhambo oluncinci ukuya eLwandle kwiFranklin Parade!
Kanye kunye nokubekwa kwindawo efanelekileyo yokuhlola i-bluff, iicafe zalapha ekhaya, umkhondo wobugcisa kunye nengingqi yewayini ejikelezileyo, uya kuba kwindawo entle yokuthatha ulonwabo lwePeninsula ebukekayo yeFleurieu apho kusefa, ukuloba, ukuntywila, ukuhamba ngenqanawa ngomnenga. ukubukela, iindlela zokutya, ukhenketho lwephenyane, amava e-4WD kunye negalufa yonke yimisebenzi yokuzikhethela.
Jonga unxweme lwaseMazantsi kubandakanya iVictor Harbour kunye neGranite Island apho unokubona umnenga okanye emibini kufutshane nonxweme. Nandipha ukusefa okanye ukuqubha eMiddleton Beach. Emva koko, yiya ngaseGoolwa nakwiSiqithi saseHindmarsh kwisidlo sasemini. Misa ePort Elliot ukuze ufote unxweme olumangalisayo lweHorseshoe Bay kunye neBasham Beach. Buyela ngeMount Compass kunye ne-Alexandrina Cheese Company!
4.80 · Izimvo eziyi-31
UKUDIBANA NE-BAY - IMIBONO EPHOXAYO-IINDLELA ZOKUHAMBA-I-BLUFF-I-CAFES-IINDLELA-EZOKUTYA--------------------------- YOSAPHO---- U-YONWABO
Izimvo eziyi-1 453
Umamkeli wakho othandekayo, uKate, uya kuba nawe ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho.